कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् फाल्गुण ३० गते बिहिवार « Dhankuta Khabar
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् फाल्गुण ३० गते बिहिवार
प्रकाशित मिति : Mar 13, 2019
समय : 11:58 PM
श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल फाल्गुन ३० गते बिहीबार इश्वी सन् २०१९ मार्च १४ तारीख फाल्गुन शुक्लपक्ष अष्टमी तिथी मृगशिरा नक्षत्र प्रीति योग ८ः५९ बजे सम्म पश्चात आयुष्मान योग भद्रा करण चन्द्रमा वृष राशिमा १३ः०७ बजे सम्म पश्चात मिथुन राशिमा आनन्दादि योगमा मृत्यु योग सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, होलिकारम्भ, चीरोत्थान गर्ने दिवस, चीरस्वाय ,फाल्गुण मसान्त –ज्यो.पं. सरोज घिमिरे/धनकुटा खबर ।
मेष राशि -चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ
नयाँ कार्यको थालनिले मन प्रशन्न रहला । खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । मध्यान पश्चात दाजुभाई तथा ईष्ट मित्र बिचको सम्बन्धमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ ।मान्यजनको साथ सहयोग द्वारा गरीरहेको काममा बिशेष फाइदा प्राप्त हुनेछ ।
अनावश्क यात्रा हुन सक्छ । बिश्वासिलो ब्यक्ति हरुबाट धोका हुन सक्छ । शत्रुपक्ष मजबुत रहनाले कार्य क्षेत्रमा बिशेष सजग रहनु पर्ला । मध्यान पश्चात मान प्रतिष्ठामा बृद्धि हुनेयोग परेकोछ । दाम्पत्य शुखमा कमि आउनेछ। मान्यजन को साथ प्राप्त हुनेछ ।
मित्रजनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । आफ्नो चार्तुयताले कार्य सम्पादन गर्दा सबैको चर्चा को बिषय भईन सकिनेछ । मध्यान पश्चात कोध्रको कारण मानसीक चिन्ता रहन सक्छ । दाम्पति बिच सामान्य कलह रहने सम्भाबना रहन सक्छ ।
मान्यजनको साथ सहयोगमा गरीएका कार्यहरु प्रभाबकारी रहन सक्नेछ । सभासम्मेलनमा सरीक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ । बिद्यार्थी वर्गका निम्ती समय त्यति उत्तम रहेको छैन । मध्यान पश्चात मेहेनत र परीश्रम को कदर हुन सक्ने योग रहेको छ ।
बाणिको कारण दाम्पत्य शुखमा बाधा आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । ईष्ट मित्र बिच सामान्य बादबिवादको योग रहेको छ ।स्वास्थ सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्नेछ । मध्यान पश्चात मित्र तथा दाजु भाई बिचको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ ।
सामान्य चुनौति पस्चात आम्दानि राम्रो रहनेछ । अरुको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने छ । सामान्य अप्रिय खबरले मानसिक चिन्ता ब्यहोर्नु पर्ला । मध्यान पश्चात जिद्दी स्वभावको कारण प्रतिश्पर्धामा पराजयको सामना गर्नुपर्नेछ ।
पारीवारीक झोरझमेला ले सताउनेछ । सामाजिक कार्यमा आफु अग्रसर रहेपनि त्यसको श्रेय भने अरु लाई मिल्नाले सामान्य खिन्नता बोध हुनेछ । समयमा सहि निर्णय गर्ने क्षमता बढ्ने छ । मध्यान पश्चात बौधिक ब्यक्तिहरुका बिचमा आफु कमजोर भएको महसुस हुनेछ ।
मीन राशि-दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि
यात्रा हुनसक्ने सम्भाबना रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट बिग्रन लागेको काम बन्ने योग रहेको छ । साझेदारी कामको आम्दानि भने उत्तम रहनेछ । मध्यान पश्चात आम्दानिको क्षेत्र सबल रहेता पनि कार्यको क्षेत्रमा भने त्यति मन लाग्ने छैन ।